JVC ama Kenwood JVC ka Corporation waa shirkad in uu ku yaalaa ad xarunteeduna tahay magaalada Yokohama ee dalka Japan oo ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan si ay u horumariyaan kaamirada kala duwan iyo waxyaabaha la xiriira elektaroonik ah si loo hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in JVC ayaa sidoo kale waxa kaamirada AVCHD iyo ka dib Sony oo Panasonic waa shirkadda saddexaad ayaa qaaday talaabo arrintan la xiriira si loo hubiyo in ugu fiican in dadka isticmaala ay bixisay arrintan la xiriira.
Qeybta 1: Top 3 Jvc Avchd kaamirada
Qeybta 2: Sida loo Connect iyo Bedelka Videos ka Jvc Avchd kaamirada si Mac
Qeybta 3: Sida loo Connect iyo Bedelka Videos ka Jvc Avchd kaamirada in Windows
Qeybta 4: Jvc Avchd Video Converter talinayo
Users ayaa lagu qiimeeyo fiidiyo tan sare iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in waxa ugu fiican in la siiyo user ee arrintan la xiriira. Fiidiyo ayaa jaban ee heerka aad u magacaaban oo la awoodi karo oo ah $ 199. Sidaas darteed waa in sidoo kale lagu xusay in user waa in aad u hesho heshiisyo ugu fiican oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa la soo qoran Amazon iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in sidoo kale la hubiyo in ay 4.6 out of 5.0 rating waxaa sidoo kale loo arkaa in arrintan la xiriira. Guud ahaan fiidiyo ah waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican:
2. JVC Everio GZ-HD10 AVCHD High Qeexid fiidiyo
Iyadoo 10x zoom indhaha dadka isticmaala Cam waxa uu qiimeeyo waxa 4.8 out of 5 marka ay timaado website ka weyn ee adduunka sida Amazon. Waxaa sidoo kale in la xuso in Cam waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican si loo hubiyo in ay heshiis ugu wanaagsan oo lagu daydo waxaa la siiyaa dadka isticmaala iyo waxa uu sidoo kale loo arkaa in ay tahay cams ku jirta miisaaniyadda user ee. Qiimaha ku qoran of this piece casriga ah laga cabsado waa $ 274 oo aad ku magacaaban:
3. JVC Everio GZ-X900 AVCHD HD Flash fiidiyo
Waa mid ka mid ah kaamirada ugu wanaagsan kaas oo sidoo kale ka dhigi kartaa hubiyo in user helo natiijada ugu wanaagsan iyo sanamyadii weli ayaa waxaa sidoo kale soo qabtay iyadoo la kaashanayo 9MP weli camera oo uu soo socoto camera ah oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Muuqaalka guud ee Cam waa state of farshaxanka iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u isticmaala. Rating guud waa 4.6 out of 5 on Amazon iyo wax soo saarka la qiime jaban ah $ 642 taas oo ku magacaaban.
Waxaa sidoo kale in la xuso in user ma aha oo kaliya helo ugu tayada sareeya iyo sidoo kale fasalka laakiin waxa ay sidoo kale wuxuu hubiyaa in dadka isticmaala ay sidoo kale ka heli natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira marka ay timaado qaab AVCHD waana mid ka mid ah hababka ugu fiican ee si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican waqti ma at dhan gudahood. Waxaa sidoo kale in la xuso in JVC ee lagu yaqaan tayada iyo fasalka oo uu soo dhigay summad ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in aad u hesho adeegyada ugu horumarsan ugu fiican oo aan wax dadaal ah intii ee korantada Japan waa kuwa la texgeliyo xiddigaha ugu fiican oo ugu horumarsan ee arrintan la xiriira oo ilaa hadda dadka kalsoonida ma aha oo kaliya, laakiin sidoo kale in la hubiyo in ugu wanaagsan ee la sameeyo si cams iyo nidaamka guud ee soo socota in marka ay timaado AVCHD Qaabka marka laga reebo Sony oo Panasonic. Waxaa sidoo kale in la xuso in user sidoo kale uu helo adeegyada macaamiisha ugu fiican iyo sabab la mid ah baahida loo qabo qalabka korontada ee uu kor u kacaya.
Qeybta 2: Sidee in ay ku xidhmaan iyo videos ka kaamirada AVCHD JVC wareejiyo Mac
Waa in la ogaadaa in barnaamijyada software taageeridda waxaa loo isticmaalaa si loo hubiyo in arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Si aad u hesho heshiisyo ugu wanaagsan waxa ay sidoo kale waa in la ogaadaa in sida ay tahay la jaan qaada labada dhufto ee OS sida daaqadaha iyo Mac. Ka dib waa hab ah in ay tahay in la raaco arrintan la xiriira marka ay timaado Mac:
1. file exe waa in la soo bixi URL www.ufusoft.com/download/ufusoft-avchd-video-converter-603009.exe" si loo hubiyo in hannaanka bilaabo:
2. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in faylka la geliyo iyo barnaamij la furay:
3. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in button file Add la riixi in ay sii wadi arrintan la xiriira:
4. user ayaa markaas u baahan yahay in la hubiyo in qaabka wax soo saarka markaa la sameeyaa si ay goobaha fiicnayn:
5. button diinta waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso
Qeybta 3: Sida loo xirmaan iyo videos ka kaamirada AVCHD JVC wareejiyo Windows
Soo socda waa habka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira ee la xiriirta daaqadaha:
1. software image Pixela waa in laga soo degsan iyo bilaabay. Marka waxa la sameeyey deegaanka qabashada waa in la wareegay on:
2. button Qabsashada waa ka dibna in la adkeeyey,
3. button fiidiyo waa ka dibna in la adkeeyey,
4. Sida tallaabo la soo dhaafay user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in button qabashada la isku soo riixayo mar fiidiyo JVC ku xiran tahay in ay computer ka iyo waxa ay sidoo kale ka baxayo geedi socodka:
5. bar horumarka ee arrintan la xiriira hadda hubin doona in faylasha lagu wareejiyay oo mar bar la dhamaystiro hanaanka la dhammeeyo.
Qeybta 4: JVC AVCHD video Converter talinayaa
Wondershare Waa barnaamijka ugu wanaagsan ee ay tahay in la isticmaalo arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in geeddi-socodka waa in la raaco ayaa la soo sharxay hoos ku qoran:
1. Waxaa lagula talinayaa in ay soo booqdaan http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html si loo hubiyo in barnaamijka la bilaabay:
2. button file add waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in faylka AVCHD JVC waxaa ku raran yihiin in interface ugu weyn:
3. format ayaa la doonayo waa in la soo xulay guddi saxda ah:
4. button diinta waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
> Resource > Beddelaan > jvc avchd Talooyin iyo tabaha